ဟိန်းဝေယံဘယ်လို ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေရွေးချယ်ရိုက်ကူး ဖြစ်မလဲ
ပရိသတ်တွေက ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရင် ဇာတ်လမ်း အပေါ်မှာမျောပြီးတော့ ပါသွား တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ပိုပြီးတော့ သဘောကျတယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းက နေပြီးတော့ ဟီးရိုးအနေ နဲ့ ချွန်ပြီးတော့ သွားရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးထက် . . . Read More
ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်လို့ရသလို အကြံပြုလိုလည်းရပါတယ် လို့ အိချောပိုပြော
ပရိသတ်ဆိုတာ ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိ သလို မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း ဝေဖန်တာ တွေရှိမှာပဲ။ ချောလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဝေဖန် တော့လည်း ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလေ. . . Read More
မွေးရက်မြေမှာ အလှူပြန်လုပ်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် ကြည်နူးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ် ဆိုတဲ့ နေတိုး
ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ဒီအလှူနဲ့ အတူတူ ဘုရားရဲ့အလှူ့ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမအနေနဲ့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်တယ်။ ပရိသတ်တွေအားပေးလို့လည်း အခုလိုလှူဒါန်းနိုင်တာပါ။ ပရိသတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး အလှူလုပ်တယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်. . . Read More
အဆိုပိုင်းမှာ ပရိသတ်လက်ခံပေးတဲ့ အခြေအနေရောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ့် စိုးပြည့်သဇင်
သင်္ကြန်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှ တော့ ဇာတ်ကားမရိုက်ဖူးဘူး။ ဒါတော့ ပထမဦးဆုံးပါပဲ။ ရိုးရိုး သီချင်းဆိုတာထက်တော့ သူက နည်းနည်းပိုပြီးတော့ အလုပ်များ တာပေါ့နော်. . . Read More
Rဇာနည်လို ခင်ပွန်းမျိုးရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ် ဆိုတဲ့ ဝမ်း
အစ်မက ကလေး လိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေး စရိတ် သိပ်မတက်နိုင်လို့ မလိုချင်တော့ တာ။ အစ်မက မွေးရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ လိုလည်းလိုချင်ပါ တယ်။သူတို့ကို ကြီးပြင်းအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့တော့ မနိုင်မှာစိုးလို့. . . Read More
ဒီဘုရား တည်​တဲ့အတွက်​ သူအမြဲတမ်း ကြည်​နူးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီဘုရားအ ကြောင်းပြောရင်​ သူအမြဲတမ်းပျော်​နေတာ တွေ့ရတယ်။ သူက တကယ်​ကို မွန်​မြတ်​တဲ့သူ. . . Read More
တေးသံရှင် Rဇာနည်​နဲ့ ရန်​ရန်​ချမ်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး Aqua Village Waterpark ဖွင့်​လှစ်​
အဓိကတော့ ကျွန်​တော်​တို့ ဆော့ချင်​တာပါ။ အခု Aqua Village Waterpark ကို အသက်​အရွယ်​မရွေး၊ ပေါင်​ချိန်​ဘယ်​လောက်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ လာရောက်​ဆော့ ကစားလို့ ရပါတယ်​။ တစ်​ခေါက်​လောက်​တော့ လာကစားကြည့်​ပါ. . . Read More
မြင့်မြတ်၊သက်မွန်မြင့်တို့နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ရလို့ ရင်တွေခုန်နေတဲ့ ခြူးလေး
မသက်မွန်ရော၊ ကိုမြင့်မြတ်ရောနဲ့ တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ ရင်တွေတုန် လွန်းလို့ Audio သမားကတောင် လာပြောရတယ်. . . Read More
ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့မတူဘဲ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့သင်္ကြန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်တွေ လုပ်လာကြတယ်။ မိသားစု အလိုက် ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ သင်္ကြန်ရဲ့ အရသာကို အပြည့်အဝခံစားရတယ်။ ဖြူဖြူကတော့ ပျော်ပါတယ်. . . Read More
ဆရာမြို့တော်မောင်ယဉ်အောင်လို အနုပညာရှင်မျိုး မြန်မာပြည်မှာ အင်မတန်ရှားတယ် ဆိုတဲ့ ဖိုးချစ်
ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ကုန်ကျခံပြီး ရုပ်ရှင်စတူဒီယို တည်ဆောက်မယ့်ကိုအောင်ကျော်ထွန်း
နေတိုးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မုန်းစွဲဇာတ်ကားကို ကြည့်ချင်သူအိန္ဒိယမင်းသမီးရီယာရေး
ပရိသတ်ဆိုတာ ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိ သလို မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း ဝေဖန်တာ တွေရှိမှာပဲ။ ချောလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဝေဖန် တော့လည်း ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလေ. . .
လူဆိုတာ လူအများနဲ့ဆက်ဆံမှု ရှိရမယ် ။ အပြန်အလှန်နားလည်မှု ရှိရမယ် ။
လူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း ဒီလူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင် အသုံးချဖို့သက်သက် သဘောမထားရဖူး ။
အခုခေတ်မှာ အတ္တစိတ်ပိုအားကြီးလာတယ်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ် ပိုအားကြီးတယ်။
လူတွေကို ချစ်တတ်တာဟာ အဆင့်မြင့်တဲ့ အနုပညာဖြစ်ပါတယ် ။
The Lion King ဇာတ်ကားသစ် နမူနာ ပြသပြီး ရုံတင်ရက်ကြေညာ
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဘီလ်ဘုတ်ဂီတဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ